Lalatiana/Rinah : Mirefarefa amin’ny tany ! -
AccueilRaharaham-pirenenaLalatiana/Rinah : Mirefarefa amin’ny tany !
Lalatiana/Rinah : Mirefarefa amin’ny tany !
Nampiteny ny moana ny fandaharana nataon-dry Lalatiana Rakotondrazafy sy Rinah Rakotomanga, satria dia tena « mirefarefa amin’ny tany » tanteraka. Lasa resaka foko sy adim-poko sisa ny adihevitra nataon’izy ireo, nanenjehana ny kandidà laharana faha-25. « Ravalomanana Marc no voalohany nanangana governemanta tsy nahitàna afa-tsy Merina… ».
‘Ndeha atao izany hoe noho io antony voalazan’i Rinah Rakotomanga sy Lalatiana Rakotondrazafy io no nanonganana ny fitondrana Marc Ravalomanana tamin’ny taona 2009. Koa nahoana no naverin’ny fitondrana Andry Rajoelina nandritra ny Tetezamita? Avy eto afovoantany avokoa nge ireo filoha-na andrim-panjakana nandritra ny Tetezamita e! Dolin Rasolosoa filohan’ny CST, Mamy Rakotoarivelo filohan’ny CT, ny jeneraly Ranto Rabarisoa filohan’ny MDN, Jean Michel Rasolonjatovo filohan’ny HCC, Hery Rakotomanana filohan’ny CENI-T, ary nanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety tao amin’ny Hotel Ibis Ankorondrano momba izany mihitsy ireo mpanao politika toa an-dry Vaovao Benjamin.
Lasa misy fijerena tavan’olona sy volon-koditra indray ve izany ny fiainam-pirenena? Any ve sisa no adihevitra tokony hipetraka amin’izao fotoana izao? Malagasy avokoa na avy any Avaratra, Atsinanana, Atsimo, Andrefana ary Afovoantany, ary fiaviana (nationalité) tokana ihany no hita anaty kara-panondro na “passeport”: malagasy.
Heverina araka izany fa tsy anjarantsika mpanao gazety matihanina manana andraikitra manabe ny olom-pirenena no hampiditra resaka foko sy adim-poko amin’izao vanim-potoana izao. Efa nilaozan’ny toetr’andro rahateo izany amin’izao taonjato faha-20 izao, ary tena mirefarefa amin’ny tany izany adihevitra izany. Aza hadinoina fa efa minisitra nandritra ny fitondrana Marc Ravalomanana ny praiminisitra ankehitriny, Ntsay Christian. Toraka izany koa ny praiminisitra Jacques Sylla, vadin’i Yvette Sylla ny minisitry ny Varotra MAPAR ankehitriny. Aoka hanalavitra sy handevina im-pito mandifitra olona izany resaka foko sy adim-poko izany isika, fa tsy hitondra tombontsoa ho an’ny firenena velively izany.
Hentitra ary tsy miova amin’ny heviny ireo mpianatra malagasy avy amin’ireo oniversite atsy Frantsa. Manohitra marindrano ny fanasana an’i Andry Rajoelina hanatrika ilay lanonam-panokafana karakarain’ny ASPA sy Newpolis izy ireo… Propagandy « Tsy fanaovana propagandy ...Tohiny